Uzinakekela kanjani izinwele zakho ezisontekile ngokwemvelo ngaphansi – SL Raw Virgin Hair LLC.
You can still care for your natural hair, scalp, and extensions so you get the best of both worlds. A healthy scalp, clean, healthy growing hair, and natural hair
Apr 29, 2022 | Friendly Blogger
Zonke izinwele zakho ezigoqene ngokwemvelo zivikelekile ngokuphephile ngaphansi kwe-weave yakho ukuze zivikeleke. Kodwa uqhubeka kanjani ukuyigcina?
Leyo inkinga eyinhloko ngale nkinga eyodwa enkulu yokuluka - ukufinyelela okulinganiselwe izinwele zakho nesikhumba sakho, ikakhulukazi uma uthola isandiso sokuthunga. Ukudebeselela izinwele zakho zemvelo ngaphansi kwe-weave kungaholela emiphumeleni embalwa engadingeki.
Kodwa konke akulahlekile.
Usengakwazi ukunakekela izinwele zakho zemvelo, isikhumba sekhanda, nezandiso ukuze uthole okungcono kakhulu kuyo yomibili imihlaba. Ikhanda elinempilo, izinwele ezikhulayo ezihlanzekile, ezinempilo, nezandiso zezinwele zemvelo eziqhubeka zibukeka njengezintsha.
Nawu umhlahlandlela wethu wokugcina wokunakekelwa kwezinwele wokuthi ungazinakekela kanjani izinwele zakho ezisontekile ngokwemvelo ngaphansi kwe-weave (kanye nezandiso zakho zezinwele ezisontekile).
Ukulungiselela ukufakwa kwe-weave
Ngaphambi kokufaka noma yiziphi izinwele zokuluka, izinwele zakho zidinga uthando oluthile. Ukwelashwa okujulile okuthambisayo kungaba kuhle ukukusiza ukuthi ukhiyele noma yikuphi umswakama ngemva kokuhlanza izinwele zakho.
Uma izinwele zakho sezilukiwe, thambisa imiluko kanye nendawo ezungezile ngaphambi kokufaka isivalo se-mesh weave-in kanye/noma izandiso. Ukwenza lokhu kusiza ukusekela izinwele zakho zemvelo ezisontekile ngesikhathi ufaka isandiso.
Uma ungafaki i-DIY-weave yakho, umdwebi wakho wesitayela kufanele enze okungenhla.
Uma ulungiselela futhi umswakama izinwele zakho ngaphambi kokuzifaka, uzovala iziphetho zakho okudingekayo ukuze usize ukuvimbela ukuhlukana.
Ukunakekela izinwele zakho zemvelo ngaphansi kwe-weave
Manje njengoba i-weave isifakiwe, imayelana nokunakekela isandiso ngokwaso (ikakhulukazi uma izinwele ziwu-100% wezinwele zemvelo zomuntu) kanye nezinwele zakho ngaphansi kwe-weave.
Izingqinamba ezintathu ezibalulekile ezivela lapha uma kuziwa ezinweleni zakho zemvelo zifaka:
Uzigeza kanjani izinwele zakho ngaphansi kwe-weave yokuthunga
Uzithambisa kanjani izinwele zakho ngaphansi kwe-weave
Uzigcina kanjani izinwele ziphilile ngaphansi kwe-weave
Enye yezinganekwane esishesha ukuyichitha ukuthi yebo, ungakwazi ukugeza izinwele zakho ngenkathi zisesitayeleni se-weave noma sokuzivikela. Ngakho-ke, nansi indlela ongazinakekela ngayo zontathu izinto ezikukhathazayo lapho ugqoke i-weave.
Shampoo futhi ulungise izinwele zakho
U-LeAna McKnight, usaziwayo wethu wesitayela sasendlini nomsunguli we-SL Raw Virgin Hair, uncoma ukugeza izinwele zakho kanye ngeviki, noma okungenani njalo ezinsukwini eziyi-10. Lokhu kuqinisekisa ukuthi ungakwazi ukugcina isikhumba sekhanda sinempilo ngaphansi kwesandiso.
Uma wenza le nqubo ekhaya, into elula ukuthola ibhodlela elinombhobho. Yigcwalise nge-shampoo, bese uyifaka ngqo ekhanda lakho. Gcoba ngobumnene ukuze ungacasuli isikhumba sakho sekhanda noma ubeke ukungezwani okungadingekile ezinweleni zakho ezibambe isandiso endaweni. Bese ugeza futhi ubeke isimo.
Qinisekisa ukuthi izinwele zome ngokuphelele.
Londoloza isikhumba sakho sekhanda
Ukuhlanza njalo kufanele kuvimbele ukulunywa. Kodwa uma usazizwa uluma kancane, kunemigqa eminingana yezinwele ehlinzeka ngemikhiqizo yezinwele namathuluzi aklanyelwe ukunakekela nokuvikela isikhumba sekhanda nezinwele ngaphansi kokulukwa.
Susa i-weave uma kunconywa
Ukugcina i-weave isikhathi eside kunokunconywa kungenza umonakalo omkhulu ezinweleni zakho. Ukudonsa njalo kwe-weave emicu yezinwele zakho kungaholela ekuqhekekeni noma ekuqothukeni kwezinwele.
Ukunikeza izinwele zakho ikhefu ku-weave kusiza futhi ukuvikela izinwele zakho zemvelo. Ngakho-ke, zama ukungafaki kabusha ngokushesha ngemva kokukhipha i-weave uma ungakwazi ukukusiza.
Ukunakekela ukuphuma kwe-weave
Uma ufaka ukunakekelwa okuphezulu, njengokuthunga ngaphandle kokushiya ngaphandle, uzodinga futhi ukunakekela okwengeziwe ngezinwele zakho zemvelo.
Ukuze uphume, qiniseka ukuthi usebenzisa isivikelo sokushisa esiyikhwalithi njalo lapho ufaka ukushisa ukuze uhlanganise izinwele nesandiso.Izinhlobo ezintathu ezinhle kakhulu zokuvikela ukushisa ongazicabangela yi-Chi 44 Iron Guard, i-Mielle Organics Thermal Spray, kanye ne-Kenra Thermal Styling Spray
Nakuba ungasebenzisa isivikeli ukushisa, zama ukungasebenzisi ukushisa okuningi emaphethelweni akho.
Futhi, qiniseka ukuthi ugcine isikhathi sakho sokuhamba siswakama. Imikhiqizo enotshwala izomisa isikhathi sakho osishiye ngaphandle, ngakho-ke gwema noma ubeke imingcele leyo ngangokunokwenzeka.
Ukunakekela isandiso sakho sezinwele ezigobile
Uma utshale ku-100% ukunwetshwa kwezinwele zabantu ezimsulwa, uzodinga ukuqikelela okufanele ekuzinakekeleni. NgokukaLeAna, uzofuna ukugoqa noma ukugoqa isandiso sezinwele ebusuku. Bese umboza ngebhonethi ye-satin. Lokhu kusebenza kahle ekwandisweni kwezinwele eziqondile futhi kusiza ukulondoloza izinwele, ngakho-ke zihlala isikhathi sokuphila esilindelekile. (Isibonelo, izinga eliphezulu elingu-100% izinwele zabantu ezimsulwa zingahlala iminyaka engu-2-3 ngokufakwa okuningi uma zinakekelwa kahle).
Uma usebenzisa izandiso ezigoqekile, inhloso ukuvimbela ukuhlangana noma ukuhlanganisa. Ngakho-ke, into engcono kakhulu ongayenza lapha ukuluka noma ukusonta izinwele ebusuku - njengoba ubungenza ngezinwele zakho ezi-kinky curly - bese umboza ngebhonethi ye-satin noma isikhafu .
Uma ungakhululekile ukunakekela izinwele zakho ngaphansi kwe-weave yakho, khuluma nomdwebi wakho. Ungakwazi ukuhlela izinsiza zokunakekela njalo phakathi nesikhathi onaso esandisweni ukuze uqinisekise ukuthi izinwele zakho zemvelo zihlala zivikelekile ngangokunokwenzeka.
Uchwepheshe wesaluni omuhle uzoqinisekisa ukuthi usebenzisa imikhiqizo nezinqubo ezifanele uhlobo lwezinwele zakho kanye nezandiso zezinwele onazo.
Ukufingqa, nazi izindlela ezingcono kakhulu zokunakekela izinwele zakho ezigoqene ngokwemvelo ngaphansi kwe-weave (kanye nezandiso zakho zezinwele ezisontekile).
Vimbela iziphetho ezihlukene lapho wenza ukwelashwa kwangaphambili ukuze umswakama futhi uvale iziphetho zakho.
Hlanza izinwele zakho ngaphansi kokulukwa okungenani njalo ezinsukwini ezingu-7-10 ukuze ugcine isikhumba sekhanda sinempilo.
Sebenzisa okokuvikela ukushisa kunoma iyiphi ikhefu ngaphambi kokufaka ukushisa ngesitayela.
Ngezandiso zezinwele ezisontekile, ziphathe njengoba ubungenza izinwele zakho zemvelo. Geza kanye nesimo. Sebenzisa umkhiqizo ovikela ukushisa ngaphambi kokwenza isitayela. Gcoba ngokucophelela futhi uphine ebusuku ngaphansi kwebhonethi ye-satin ukuze ulondoloze izinwele.
Susa i-weave uma kunconywa.
Landela lezi zincomo futhi uzokujabulela kakhulu ukugqoka ama-weave ngenkathi uvimbela ukulimala kwezinwele zakho zemvelo. Uzoba nezinwele ezinempilo nesikhumba sekhanda, kanye nezandiso zezinwele ezigoqene ezinhle.
beauty tips and trickscurly hairDIYhair bloghair carehair care guidehair educationhair guidehaircarehow to care for human hairnatural hairnaturally curly hairraw virgin hairsew in weave maintenanceSL Raw Virgin Hair